Huawei mebiri ihe onyonyo Samsung site na ọkwa nke P30 | Androidsis
Huawei mebiri onyonyo Samsung na mgbasa ozi maka P30 na ụlọ ahịa South Korea
Agha nke smartphone na -adọrọ mmasị n'afọ a, ọkachasị n'etiti Samsung na Huawei, ebe ụlọ ọrụ abụọ a bụ ndị kacha eme ekwentị na ụlọ ọrụ ụwa niile.
Oge a, dịka akụkụ nke mbọ ibelata omume ibe ya, Huawei wepụtara nnukwu bọọdụ mkpọsa P30 usoro n'elu ụlọ ahịa Samsung Ebe a na -ere ahịa na Brisbane, Australia. Enwere ike iwere nke a dịka ịkwa emo, ọ bụ ya mere akụkọ ji apụta na mkpatụ.
Ma usoro Huawei P30 na Galaxy S10 nke Samsung na -asọrịta mpi ozugbo, n'ihi na ha bụ ngwaọrụ flagship nke oge ụlọ ọrụ abụọ a. Ndị a na-agụnye atụmatụ dị elu. Ya mere, Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ụdị abụọ a na -anwa ikpuchi mobiles nke ha, dị ka ọ na -eme na nke a.
Samsung mepụtara ụlọ ahịa flagship mara mma.
Huawei zụtara nnukwu mgbasa ozi n'elu ya.
- Jen Dudley-Nicholson (@jendudley) Nwere ike 4, 2019
Samsung na Huawei etinyela ụdị agha a ọtụtụ oge n'oge na -adịbeghị anya. N'oge gara aga na Dubai, Huawei wepụtara bọọdụ mkpọsa buru ibu na -akpọsa ngwaọrụ P30 megide ọkwa nnukwu Galaxy Korea S10. Huawei kwudịrị Galaxy S10 na njirimara dị elu nke P30 dị ka ihu ihu 3D na ndị ọzọ site na akaụntụ Twitter gọọmentị ya.
Oge ọzọ, Ụgbọ ala Huawei kwụsịrị n'afọ gara aga n'otu n'ime ụlọ ahịa Apple, na akwụkwọ mmado na -ekwupụta na "Renaissance na -abịa." Nke a bụụrụ ụlọ ọrụ Cupertino ihe, n'ezie.
Huawei gafere nde 206 na 2018
Dị ka akụkọ IDC na -adịbeghị anya, Huawei mụbara mbupu ụgbọ mmiri ya site na 50% na nkeji mbụ nke 2019, ebe Apple dara 30%, ma e jiri ya tụnyere oge ahụ n'afọ gara aga. Samsung ka nọ n'elu, na -ebuga nde 71.9 na nkeji mbụ, mana ọ hụrụ mbelata 8.1% karịa afọ gara aga. Ọ ga -atọ gị ụtọ ịhụ ka ire ahịa si etolite n'ime afọ a fọdụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei mebiri onyonyo Samsung na mgbasa ozi maka P30 na ụlọ ahịa South Korea
Na May 13, Oukitel K9 enwere ike idobe ya
Xiaomi Redmi Rịba ama 6 Pro na mmelite gam akporo